Uri Kutumira Email Kwaani? | Martech Zone
Chishanu, February 25, 2011 Svondo, Ndira 13, 2013 Douglas Karr
Shamwari yakanditumira katsamba nhasi nezve sevhisi inonakidza yekumisikidza huwandu hwevanhu, hwekutenga uye hwenzvimbo neruzivo rweyako email inonzi Kubatanidza Injini. Iyo sevhisi inokutendera iwe kuendesa hash kodhi kune ako maemail zvinyorwa kuti uchengete yako email kero zvakachengeteka. Iwe unoisa makodhi ako ehih (kiyi yakavharidzirwa yakashandiswa kune yakasarudzika email kero) kune sevhisi uye vanoisa iyo data.
Vazhinji vatengesi veemail vanongofarira zvimwe vanyori, asi usatarise kune zvakakosha yeavo subscribers. Batch uye blast ndiyo nzira yekare uye inonyanya kupfeka email yako uye inoguma nekumwe kunyunyuta, kusazvinyora uye kudzikisira-kuburikidza nemitengo uye shanduko. Kuziva huwandu hweavo vane kuroorana newe iwe inokutendera iwe kurega kuputika uye kutanga kugovera yako rondedzero. Nekugadzirisa iro rakakodzera meseji kune chaiye kunyorera, iwe uchaona kuwedzera kwakakosha mukutendeuka.
Isu tinoshandisa yakachengeteka, yakavharidzirwa email hash kodhi kuenzanisa vatengi vako neanopfuura makumi mashanu emabhiriyoni chaiwo-epasirose data mapoinzi uye ipapo nekuvaka yakajeka nhoroondo yepasiti yako yekunyorera. Ingoisa zvimiro zvako zvehash uye mukati memaminetsi iwe unenge uine ruzivo rwakadzama mukati mevatengi vako kusanganisira huwandu hwevanhu, zvido, maitiro ekutenga, nzvimbo uye nezvimwe zvakawanda. Kubva ku Kubatanidza Injini nzvimbo.
Zvinotaridza kuti Connection Injini yakanda mabhero ese uye muridzo uye yakanyatso chengeta iyi iri nyore, yakachengeteka nzira yekuisa data. Ini ndinotenda chaizvo kana vanhu vachichengeta masevhisi akareruka seizvi! Vadaidze kuti va free trial.
PPC maringe SEO: Spy vs. Spy
Izvi zvinogona kunyatso kuve rubatsiro rwakakura nekuchengetedza track yevandinyoreri. Ini ndichafanirwa kuyedza izvi.